Shiinaha Gawaarida Mashiinka Mashiinka Mashiinka iyo Badeecada | Shinva
Design Naqshadeynta qaab dhismeedka iyo hannaanka
Qolka salka leh ee SUS316L waa fidsan yahay oo sameysmaya hal mar oo aan lahayn geeska dhinta iyo wadajirka alxanka, taas oo kafiican si habsami leh u daadinta biyaha iyo keydinta biyaha.
System Nidaamka xakamaynta caqliga
Labada dhinacba albaabbada toosan ee toosan oo toosan, oo ay kontaroolaan shaashadda taabashada, taas oo ku habboon oo badbaado leh. Nidaamka wareegga waa caqli ay maamusho PLC, uma baahna xakameyn shaqaale. Dhamaan heerkulka, cadaadiska, waqtiga, marxaladaha howsha, qaylo-dhaanta waxaa lagu tusi karaa shaashadda taabashada sidoo kale waxaa duubi kara madbacadaha ku dhisan.
Of Barnaamijyo kala duwan
11 barnaamijyo horay loo sii dejiyey iyo 21 barnaamij oo qeexan isticmaale oo lagu qeexi karo iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha
Loading Rarid iyo dejin fudud
Buugga ama nidaamyada otomaatigga ah ee rarka iyo dejinta ayaa la heli karaa. Rakibida dhaqida, tarooli wareejinta iyo nidaamka gudbinta, oo kuhaboon naqshadda ergonomikada, si fudud loo hawlgalo loona meeleeyo.
Saving Keydinta tamarta
Qolka lagu maydho qaab dhismeedka biyaha lagu ilaaliyo; Taangiyada-kululeeyaha biyaha kahor iyo nidaamka kor u qaadista iyo kuleylka gaarka ah iyo qaabka dhuumaha ayaa ka dhigaya inay keydiyaan 30% biyaha iyo isticmaalka tamarta sidii hore.
Efficiency Waxtarka degdegga ah ee sarreeya
Rapid-A-520 waa mid ka mid ah dhaq dhaqe dhaqe-dhaqeyaasha adduunka, kaas oo waqtiga wareega ee caadiga ah loo yareeyay 28mins oo ay ku jiraan dhaqida ka hor, dhaqida, 1aad oo soo kordha, kacsanaanta 2aad, jeermiska iyo qalajinta. Dhanka kale waxay baari kartaa 15 baakidh DIN ah halkii wareeg.
Nidaamka preheat ee biyaha ayaa yareeyay waqtiga diyaarinta, ma jiro waqti sugitaan inta lagu jiro wareegga wareegga.
Qaabeynta aasaasiga ah
Hore: Jeermiska Qalabka Fudud ee Qalabaynta Qalabaynta ee otomaatiga ah
Xiga: Tamarta Khadka Tooska ah ee Elektaroonigga Elektroniga ah
Cajaladda Hydrogen peroxide
Cajaladda Tilmaamaha Sifeeyaha Jeermiska-Bilaashka ah ee Led
Wakiilka Nadiifinta Multienzyme ee Caafimaadka ...
Qalabaynta Xiinka Qalabka Xiinka Ultimate
Tarooliyo sallaan (Laba lakab)
Daaqada wareejinta albaabka laba-geesoodka ah (Halbeeg)